Imigomo Nesimo - iFunlandia
I-Funlandia Play System Inc.
Uyemukelwa ku funlandia.com!
Le migomo nemibandela ichaza imithetho nemithethonqubo yokusetshenziswa kwewebhusayithi yeFunlandia.com, etholakala ku-www.funlandia.com.
Ngokungena kule webhusayithi, sicabanga ukuthi uyayamukela le migomo nemibandela. Ungaqhubeki nokusebenzisa i-funlandia.com uma ungavumi ukuthatha yonke imigomo nemibandela ekuleli khasi.
Amagama alandelayo asebenza kule migomo nemibandela, iSitatimende Sobumfihlo kanye neSaziso Sokuzikhipha Emthwalweni nazo zonke izivumelwano: "Ikhasimende", "wena" kanye "nelakho" kubhekiswe kuwe, umuntu obhalisa kule sayithi futhi ovumelana nemibandela yeNkampani. "Inkampani", "We", "Us", "Yethu" kanye "Nathi", kubhekiswa eNkampanini yethu. "Iphathi", "Amaphathi" noma "Us", kubhekiswa kukho kokubili ikhasimende nakithi uqobo. Yonke imigomo ibhekisa ekunikezelweni, ekwamukelweni, nasekucatshangweni kwenkokhelo edingekayo ukwenza inqubo yosizo lwethu kwiKhasimende ngendlela efanelekile ngenhloso ebonakalayo yokuhlangabezana nezidingo zeKhasimende maqondana nokunikezwa kwezinsizakalo zeNkampani, ngokuhambisana nangokuya ngomthetho osebenzayo waseNetherlands. Noma ikuphi ukusetshenziswa kwesigama esingenhla noma amanye amagama asebunyeni, ubuningi, osonhlamvukazi, kanye / noma yena, kuzwakala njengokushintshana ngakho-ke kubhekisela kokufanayo.
Sisebenzisa ukusetshenziswa kwamakhukhi. Ngokuthola i-funlandia.com, uyavuma ukusetshenziswa kwamakhukhi ngokuya ngenqubomgomo yobumfihlo ye-funlandia.com.
Amawebhusayithi amaningi asebenzisanayo asebenzisa amakhukhi ukuthola imininingwane yomsebenzisi ekuvakasheni ngakunye. Amakhukhi asetshenziswa yiwebhusayithi yethu ukunika amandla ukusebenza kwezindawo ezithile ukwenza kube lula izivakashi zewebhusayithi yethu. Abanye esibambisene nabo / ozakwethu bokukhangisa bangasebenzisa amakhukhi.
Ngaphandle kokuthi kushiwo ngenye indlela, i-fandlandia.com kanye / noma abanikazi bayo bamalayisense bangabanini bamalungelo empahla yengqondo yabo bonke okokusebenza ku-funlandia.com. Onke amalungelo empahla yokusungula agodliwe. Ungakuthola lokhu kusuka ku-fandlandia.com ngokuzisebenzisela wena siqu, ngokuya ngemikhawulo kule migomo nemibandela.
1.ishicilela okokusebenza okuvela kuflandlandia.com
2.sell, rent or sublicense material from funlandia.com
3.khiqiza kabusha, uphindaphinde noma ukopishe izinto ezivela ku-Funlandia.com
4.sabalalisa kabusha okuqukethwe kusuka ku-fandlandia.com.
Lesi sivumelwano siqala ngosuku lwalesi sivumelwano. Imibandela nemibandela yethu yenziwe kusetshenziswa i-T & C generator.
Izingxenye zalesi siza zinikeza abasebenzisi amandla okuthumela nokwabelana ngemibono nolwazi ezindaweni ezithile zesiza. i-funlandia.com ayihlungi, ayihleli, ayishicileli noma ibuyekeze imibono ngaphambi kokuba khona kwayo kuwebhusayithi. Amazwana awakhombisi imibono nemibono ye-funlandia.com, abasebenzeli bayo, kanye / noma abaxhumana nabo. Amazwana akhombisa imibono nemibono yomuntu othumela imibono nemibono yakhe. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, i-funlandia.com ngeke ibe nesibopho samazwana noma sanoma yisiphi isikweletu, ukulimala, noma izindleko ezibangelwe kanye / noma ukuhlupheka ngenxa yanoma yikuphi ukusetshenziswa kanye / noma ukuthunyelwa kanye / noma ukubukeka Amazwana akule Webhusayithi.
i-funlandia.com inelungelo lokuqapha wonke amazwana nokususa noma yimaphi amazwana abhekwa njengangafanele, ahlaselayo, noma abangela ukwephulwa kwale migomo nemibandela.
Uyaqinisekisa futhi ukumela lokho:
1. ugunyaziwe ukuthumela imibono kule webhusayithi yethu futhi unawo wonke amalayisense nemvume yokwenza lokho;
2.Amazwana angephuli amalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula, kufaka phakathi kepha kungagcini kunoma yiliphi ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi, noma uphawu lokuhweba kwanoma yimuphi umuntu wesithathu;
Ama-3.comments ngeke aqukethe okwehlisayo, okweyisa abanye, okuhlaselayo, okuyihlazo noma okunye okungekho emthethweni okubandakanya ukuhlaselwa kwemfihlo;
4.Amazwana angeke asetshenziselwe ukucela ibhizinisi noma inkambiso noma ukuveza imisebenzi yezentengiso noma umsebenzi ongekho emthethweni.
Ngalokhu unikeza i-funlandia.com ilayisense engakhethi ukusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukuhlela nokugunyaza abanye ukuthi basebenzise, ​​bakhiqize futhi bahlele noma yimaphi amaMazwana akho nganoma yiluphi uhlobo, amafomethi, noma imidiya.
Ukuxhumanisa nokuqukethwe kwethu
Lezi zinhlangano ezilandelayo zingaxhumanisa newebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume ebhaliwe ngaphambilini:
1. izinhlaka zikahulumeni;
Abasabalalisi bezinkomba ezixhumeke ku-inthanethi bangaxhumanisa newebhusayithi yethu ngendlela efanayo naleyo abaxhumanisa ngayo namawebhusayithi ezinye izinhlangano ezibalwe; kanye ne-5.system wide Business Accredited ngaphandle kokucela izinhlangano ezingenzi nzuzo, izinxanxathela zezitolo ezisiza abampofu, namaqembu okusiza abaxhasi, okungenzeka angaxhumani ne-webhusayithi yethu.
Lezi zinhlangano zingaxhumanisa nekhasi lethu lasekhaya, ukushicilelwa, noma eminye imininingwane yewebhusayithi inqobo nje uma isixhumanisi: (a) singadukisi nganoma iyiphi indlela; (b) akusho ngamanga ukuxhaswa, ukugunyazwa, noma ukuvunywa kweqembu elixhumayo nemikhiqizo yalo kanye / noma nezinsizakalo; futhi (c) ingena ngaphakathi komongo wewebhusayithi yeqembu elixhumayo.
Singacabanga futhi samukele ezinye izicelo zesixhumanisi ezivela kulezi zinhlobo zezinhlangano ezilandelayo:
Imithombo yolwazi yabathengi eyaziwa kanye / noma yebhizinisi;
Amasayithi omphakathi e-2.dot.com;
3. Izinhlangano noma amanye amaqembu amele izinhlangano ezisiza umphakathi;
3.Online lwemibhalo amasayithi;
Izingosi ze-Intanethi ze-4;
5.izinkampani zokubalwa kwezimali, ezomthetho nezokubonisana; kanye 6. nezikhungo zemfundo nezinhlangano zezohwebo.
Sizovuma izicelo zokuxhumanisa ezivela kulezi zinhlangano uma sinquma ukuthi: (a) isixhumanisi ngeke sisenze siziveze thina noma izinkampani zethu ezigunyaziwe ngendlela engafanele; (b) inhlangano ayinalo irekhodi elibi kithi; (c) inzuzo kithi ekubonakaleni kwe-hyperlink icisha ukungabi khona kwe-fandlandia.com, futhi (d) isixhumanisi sihlobene nemininingwane ejwayelekile yezinsizakusebenza.
Lezi zinhlangano zingaxhumanisa nekhasi lethu lasekhaya inqobo nje uma isixhumanisi: (a) singadukisi nganoma iyiphi indlela; (b) akusho ngamanga ukuxhaswa, ukugunyazwa, noma ukuvunywa kweqembu elixhumayo nemikhiqizo noma amasevisi alo; futhi (c) ingena ngaphakathi komongo wewebhusayithi yeqembu elixhumayo.
Uma ungomunye wezinhlangano ezibalwe esigabeni 2 ngenhla futhi unentshisekelo yokuxhumanisa newebhusayithi yethu, kufanele usazise ngokuthumela i-imeyili ku-funlandia.com. Sicela ufake igama lakho, igama lenhlangano yakho, imininingwane yokuxhumana, ne-URL yewebhusayithi yakho, uhlu lwawo wonke ama-URL ohlose ukuxhumanisa nawo kuwebhusayithi yethu, kanye nohlu lwama-URL kuwebhusayithi yethu ohlose ukuxhumanisa kuyo . Linda amaviki angu-2-3 ukuze uthole impendulo.
Izinhlangano ezivunyelwe zingaxhumanisa iwebhusayithi yethu ngale ndlela elandelayo:
1.ngokusebenzisa igama lenkampani yethu;
Ngokusebenzisa i-Uniform Resource Locator exhunywe ku;
3.ngokusebenzisa enye incazelo yewebhusayithi yethu kuxhumene okunengqondo kokuqukethwe nakwifomethi yokuqukethwe kuwebhusayithi yeqembu elixhumayo.
Akukho ukusetshenziswa kwelogo ye funlandia.com noma omunye umsebenzi wobuciko ozovunyelwa ukuxhumanisa ngaphandle kwesivumelwano selayisense yophawu lwentengiso.
Awungeke udale amafreyimu azungeze amakhasi ethu wewebhu angashintsha ngandlela thile isethulo esibonakalayo noma ukubukeka kwewebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume yangaphambili nemvume ebhaliwe.
Asingene kunoma ikuphi okuqukethwe okuvela kuwebhusayithi yakho. Uyavuma ukusivikela futhi usivikele kunoma yiziphi izimangalo ezivela kuwebhusayithi yakho. Azikho izixhumanisi ezingavela kuwebhusayithi ezingathathwa njengokuhlambalaza, ezihlambalazayo, noma zobugebengu, noma eziphula umthetho, uma kungenjalo kwephula noma zikhuthaze ukwephulwa noma okunye ukwephulwa kwamalungelo abantu besithathu.
Sinelungelo lokukucela ukuthi ususe noma yiziphi izixhumanisi noma isixhumanisi esithile esiya kuwebhusayithi yethu. Uyavuma ukususa zonke izixhumanisi eziya kuwebhusayithi yethu ngokushesha lapho uceliwe. Futhi sinelungelo lokushintsha le Migomo neNqubomgomo Yokuxhumanisa nganoma yisiphi isikhathi. Ngokuqhubeka nokuxhumanisa newebhusayithi yethu, uyavuma ukuboshwa futhi uthobele le migomo yokuxhumanisa.
Ukususwa kwezixhumanisi kwiwebhusayithi yethu
Uma uthola isixhumanisi kuwebhusayithi yethu esiphikisayo nganoma yisiphi isizathu, ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi futhi usazise. Sizobheka izicelo zokususa izixhumanisi kepha asiphoqelekile ukwenza njalo noma sikuphendule ngqo.
Asikuqinisekisi ukuthi imininingwane ekule webhusayithi inembile, asiqinisekisi ukuphelela kwayo noma ukunemba kwayo; futhi asethembisi ukuthi iwebhusayithi izohlala itholakala noma ukuthi imininingwane ekuwebhusayithi izogcinwa isesikhathini.
Ngokwezinga eligcwele ngokuvunyelwe ngokomthetho osebenzayo, siyazilahla zonke izethulo, iziqinisekiso, nemibandela maqondana newebhusayithi yethu kanye nokusetshenziswa kwale webhusayithi. Akukho lutho kulesi sitatimende esizokhipha:
1.qeda noma ukhiphe isikweletu sakho sokufa noma sokulimala komuntu siqu;
2.qeda noma ukhiphe isikweletu sakho noma isikweletu sakho ngokukhwabanisa noma ukumelela kabi inkohliso;
3.limisha isikweletu sethu noma isikweletu sakho ngendlela engavunyelwe umthetho osebenzayo, noma 4.susa isikweletu sethu noma isikweletu sakho esingahle sikhishwe ngaphansi komthetho osebenzayo.
Ukulinganiselwa kanye nokuvinjelwa kwesikweletu okushiwo kulesi sigaba nakwezinye izindawo kulo mshwana wokuzikhipha emthwalweni: (a) kuncike esigabeni esandulele; futhi (b) iphathe zonke izikweletu ezivela ekuziphenduleni, kufaka phakathi izikweletu ezikwisivumelwano, ukuhlukunyezwa nokwephula umsebenzi osemthethweni.
Uma nje Iwebhusayithi kanye nemininingwane kanye nezinsizakalo ezikule Website zinikezwa mahhala, ngeke sibophezeleke kunoma yikuphi ukulahleka noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo.